‘मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको उपयुक्त र सशक्त उम्मेदवारी मेरै हो’ | Hamro Okhaldhunga
‘मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको उपयुक्त र सशक्त उम्मेदवारी मेरै हो’
प्रकाशित मिति: ०३ असार, २०७४
मोतीराज राईको जन्म २०२० साल असोज ६ गते ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका ५ को माथिल्लो रिचुवा गाउँमा भएको हो । उनी बुबा नरबहादुर राई र आमा धनिशोभा राईको कोखबाट जन्मिएका हुन् ।
२०३६ सालमा नेपाली कांग्रसेको साधारण सदस्य लिएर राजनीतिमा सक्रिय भएका राई २०४८ सालमा सक्रिय सदस्य हुँदै २०४९ सालमा मानेभञ्ज्याङ गाविसको गाविस उपाध्यक्ष निर्वाचित भए । त्यस्तै २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनी मानेभञ्ज्याङ गाविस अध्यक्षमा विजयी भए । कांग्रेसको ११ औँ महाधिवेशनमा जिल्ला सदस्य र १३औँ महाधिवेशनमा क्षेत्रीय सभापति भइसकेका राई ओखलढुंगा कांग्रेसका सक्रिय र इमान्दार नेता मानिन्छन् ।
उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार बनेका छन् । प्रस्तुत छ, हाल चुनावी अभियानमा होमिएका राईसँग पत्रकार गणेश राईले गरेको कुराकानी-
तपाईको पूरा नाम ?
मेरो नाम मोतीराज राई । मातृभाषा वाम्बुले राई हो । मेरो जन्म २०२० साल असोजमा मानेभन्ज्याङ गाविसको रिचुवा गाउँमा भएको हो ।
शिक्षा कतिसम्म पढ्नु भयो ?
मैले एसएलसीसम्म पढेको छु । पहिले मोलीमा पढें । त्यसपछि निसंखे माविमा पढें । एसएलसी चाहिं श्री भगवती मावि मानेभन्ज्याङबाट गरेको हो ।
तपाई राजनीतिमा कहिलेदेखि कसरी लाग्नुभयो ?
म सानैदेखि बिद्रोही स्वभावको मान्छे थिएँ । तर, पंचायतकालमा त्यो स्वभाव थोरैमात्र प्रकट गर्न पाइयो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेतृत्व गर्ने मोली गाउँमा हुर्केकोले पनि मभित्र त्यो चेतनाको बिजारोपण भएको ठान्छु । २०३६ सालमै नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य बनेको थिएँ । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य भएँ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मैले राजनीतिमा होमिन सकें । औपचारिक रुपमै भन्नुपर्दा २०४८ सालदेखि निरन्तर सक्रिय राजनीतिमा छु ।
खासमा राजनीति भनेको चाहिं के रहेछ ?
धेरै पढेलेखेका विद्वान र प्राज्ञिकहरुको निम्ति राजनीति भनेको नीति, सिद्धान्त, दर्शन आदि इत्यादि हुनसक्छ । तर, हामी गाउँघरमा जन्मिएका, दुःख, गरिबीमा पिल्सिएर हलो जोत्दै, भारी बोक्दै, बनिबुतो गर्दै बल्लतल्ल अक्षर चिनेर शिक्षाको एउटा हिस्सा पारेगरेका व्यक्ति हौं । हामी गाउँलेको हितमा बोलिदिने, लेखिदिने, आपतविपतमा भरथेग, सरसल्लाह, हारगुहार, सघाउपघाउ गर्ने मान्छे नै प्रतिनिधि हो । म पनि त्यसैमा पर्छु । गाउँघरको सेवामा जुट्नको लागि नातागोता, आफन्त, इष्टमित्रहरुले हौस्याउनु हुन्छ । प्रेरणा दिनुहुन्छ । गुहार्नु हुन्छ । त्यसो गर्दागर्दै सामाजिक सेवामा लागियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि तँ हाम्रो प्रतिनिधि बन्नुपर्छ भन्नुभयो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने पार्टी नेपाली कांग्रेसमा संवद्ध भएकोले सामाजिक सेवा गर्न सहज भयो । पार्टीको नीति, सिद्धान्तलाई न्युनतम रुपमा बुझेर अघि बढ्न सिकियो । त्यसैले सामाजिक सेवा नै राजनीतिक रहेछ भन्ने बुझेको छु ।
कांग्रेस पार्टीको कुरा गर्नुभयो । तपाई कुन तहको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ ?
मैले भनिसकें कि २०३६ सालमा नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य भएँ । २०४८ सालमा सक्रिया सदस्य बनें । ११ औं महाधिवेशनमा जिल्ला सदस्य भएँ । अन्तिम पटक १३ औं महाधिवेशनमा क्षेत्रीय सभापति बन्न सफल भएँ । मेरो सक्रियता निरन्तर छ । पार्टीको कार्यकर्ता हुनु एकातिर छ तर म समाजमा एक इमानदार कार्यकर्ताका रुपमा चिनिन्छु जस्तो लाग्छ । पार्टीकै निम्तिमात्र लडेको छुइन, सामाजिक विभेद, राजनीतिक विभेद, शैक्षिक विभेदविरुद्ध मेरो संघर्ष जारी छ ।
तपाईले कति वर्ष मानेभन्ज्याङ गाविसको नेतृत्व गर्नुभयो ?
२०४९ सालमा भएको स्थानीय निकायको चुनावमा मानेभन्ज्याङ गाउँ विकास समितिमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएँ । त्यतिबेलादेखि सार्वजनिक जीवन र सामाजिक नेतृत्वमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न थालेको हो । उपाध्यक्ष हुँदा मैले निभाएको भूमिकालाई मानेभन्ज्याङ गाविसवासीले सकारात्मक ढंगले लिइदिनु भयो । मैले गाउँघरका विकास, निर्माण, शिक्षा सबै सबैबारे एकएक गरी जानकारी लिने र समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ मेरो ध्यानकेन्द्रित भयो । त्यसैले २०५४ सालमा दोस्रो पटक स्थानीय निकायको चुनाव भयो । त्यो चुनावमा मलाई गाविस अध्यक्षमै निर्वाचित गर्नुभयो । मैले कार्यकाललाई इमानदार भएर अझ सशक्त रुपमा काम गरें भन्ने लाग्छ । दुःख भनौं कि सुख त्यसपछि स्थानीय निकायको चुनाव भएन । कार्यकालभरि सकेसम्म अविष्मरणीय बनाउन सक्यौं । बीस वर्षपछि अहिले संघीय गणतन्त्र नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भइरहेको छ ।
तपाईले आदिवासी जनजातिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सही कुरा सोध्नु भएकोमा धन्यवाद । म आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाको उपाध्यक्ष छु । दुई कार्यकाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको छु । हामीले आदिवासी जनजाति महासंघको भवन निर्माण गरेका छौं । बजेट छुटाउन पहल गर्नेदेखि त्यसलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने काममा मैले पहल गरेको छु ।
तपाई भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ?
हो, झन्डै १८–१९ वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छु । म कसरी भएँ भन्नुभन्दा पनि त्यतिबेला शिक्षा शिक्षा समितिले अध्यक्ष मनोनयन गथ्र्यो । मेरो नाम मनोनयन गर्यो । त्यसपछि नयाँ शिक्षा नियमावली आयो । निर्वाचनबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने भयो । त्यसमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, शिक्षक र अभिभावहरुले मलाई नै उठ्न लगाउनु हुन्छ । मेरो नाम परेपछि अरु कसैले पनि उम्मेदवारी नदिने वातावरण बन्यो । नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न अभिभावक नै हुनुपर्छ भनेर किटान गरेको छ । मेरो त एउटामात्रै छोरो छ । अस्विकार गर्दा पनि हेडसरलगायतले मेरो छोरालाई एघार कक्षामा भर्ना गराएरै मलाई अध्यक्ष बनाइयो । अहिले छोराले डिफार्मेसी पढिसिध्यायो, नामचाहिं उच्चमाविमा छ । अहिले पनि म नै अध्यक्ष छु ।
तपाई वि.व्य.स.को अध्यक्ष भएपछि के के प्रगति भयो त ?
आफ्नै गाउँठाउँको सबैभन्दा पुरानो शैक्षिक संस्था हो, श्री भगवती स्कुल । आफैंले पढेको स्कुल, परिवार, साखासन्तान, दरदाजुभाइ, तिनका छोराछोरीले पढ्ने एकमात्र हाई स्कुल हो यो । त्यसैले यसको उन्नति, प्रगति गर्ने जिम्मेवारी पाउनु मेरो निम्ति अहोभाग्यको कुरो हो । सुरुमा कक्षा १० सम्ममात्र थियो । म अध्यक्ष भएपछि कक्षा ११ र १२ संचालन गर्न पहल गरियो । विद्यालय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरियो । छात्रावास छ । पूरै कम्पाउण्ड वालले घेरा हालेर व्यवस्थित गरिएको छ । सुरुमा चार लाख चन्दा उठाउन पनि मुस्किल थियो । सबैतिर हारगुहार गरिएको छ । आज झण्डै पचास लाख रुपैयाँको अक्षयकोष निर्माण गरेका छौं ।
क्याम्पस संचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ओखलढुंगाका मात्र नभई खोटाङ, सिन्धुली, सोलुलगायत जिल्लाका विद्यार्थी पढ्ने केन्द्रविन्दु बनेको छ । यसरी आकर्षण बढ्नुमा मानेभन्ज्याङको प्राकृतिक बनोट, सुरम्य हावापानी, कटारी–ओखलढुंगा–सोलुखुम्बु सडकमार्गले छोएको छ । स्वच्छ हावापानी, स्वस्थ अर्गानिक खाना, बिजुलीको सुबिधा छ । म भगवती मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएपछि जेजति सुधारको पहल भयो, त्यसमा केही हदसम्म सफल भएँ भन्ने लाग्छ । त्यसमा हेडमास्टर, शिक्षक–शिक्षिका, बुद्धिजीवि, अभिभाकवर्ग, समुदायप्रति आभार प्रकट गर्दछु । जति हुनुपर्ने त्यति नभएको हुनसक्छ ।
तपाईले पहिचानलाई कसरी लिनु भएको छ ?
एक जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, समुदायप्रति उत्तिकै समान दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्दैआएको छु । नेपालको राजनीतिक परिवेशले साढे दुई सय वर्षदेखि थिचोमिचोमा पार्दैआएको कुरोलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पछिल्लो दशकमा पहिचानको विषयलाई लिएर राजनीतिक रुपमा अघि बढ्दैआएको छ । पहिचान भनेको हरेक जाति र समुदायसित हुन्छ । उसले बोल्ने भाषा, उसले पालना गर्ने संस्कृति प्रमुख रुपमा पहिचान भन्ने गरिएको छ । म यो कुराप्रति जानकार छु । म स्वयं किराती वाम्बुले राई हुँ । म वाम्बुले भाषा बोल्छु । उहिल्यैदेखि यो भाषा घरपरिवारमा बोलिदैआएको छ ।
त्यसैले २०५५ सालदेखि हाम्रो जातीय संस्था वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास)ले आयोजना गर्दैआएको वाम्बुले राई भाषाको कविता गोष्ठीहरुमा सहभागी हुँदैआएको छु । हो, म वाम्बुले भाषा लेख्न सक्दिन । तर म बोल्छु, बोलेको बुझ्छु । पढेको बुझ्छु । यसरी वाम्बुले भाषा लेख्ने, पढ्ने, पढाउने, सुन्ने, सुनाउनेहरुको हुलमा म पनि छु । वाम्बुले कविता लेख्नेले वाम्बुले भाषामात्र लेख्दैन । वाम्बुले राईहरुको मुन्धुम, परम्परागत संस्कार, हाम्रो लोकमान्यता, लोकसंस्कृतिहरुको विषयलाई उठाएको हुन्छ । त्यसरी लिखित रुपमा हाम्रो भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने युवा जमातहरुको हौसला, प्रेरणा दिनका निम्ति मेरो हरदम साथ रहँदैआएको छ । वाम्रास संस्थाले मलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले कविता गोष्ठीको प्रमुख अतिथिको रुपमा निमन्त्रणा गर्ने गरेको छ । यसमा म आभारी पनि छु ।
यसरी वाम्बुले राई भाषा, साहित्य, संस्कृतिको कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएपछि मैले छिमेकमा रहनु भएका अन्य समुदायलाई पनि पहिचान भनेको यो हो र यसरी गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउन, बुझाउन सक्छु । परेर जानिन्छ भन्ने छ । तर वाम्बुले राईले गरेर देखाएको पहिचानको विषयलाई अरु समुदायले पनि गर्नसकुन् भनेर सुझाव दिनसक्ने हैसियत निर्माण भएको पाएको छु ।
नेपालको संविधान (२०७२) कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको छ । वाम्बुले राईहरुको राजनीतिक पहिचान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
भाषा र संस्कृतिमात्र हाम्रो पहिचान भन्ने लाग्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वचाहिं अझ बढी महत्वपूर्ण छ । किनभने नीतिहरुको राजा नै राजनीति हो । राजनीतिमा हाम्रो पहुँच पुगेन भने हामी तलका तलै हुन्छौं । हाम्रो समस्याको उठान गर्ने प्रतिनिधि कोही नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहदेखि नै हामी आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठान गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि आवश्यक छ । आफू मरेरमात्रै स्वर्ग देखिन्छ भन्ने उखान छ । मर्ने कुरा फरक हो । देशलाई स्वर्ग बनाउने अवसर यही हो । त्यसैले स्थानीय तहमा हामी वाम्बुले राईहरुको अगुवाई नितान्त खाँचो छ ।
किन र कसरी ?
हेर्नोस्, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका बनेको छ । यसमा मोली, वाक्सा, उँबु (वाम्द्याल), केतुके, मानभन्ज्याङ, माधवपुर, टोक्सेल, थाक्ले गाविस जोडिएको छ । वाम्बुले राईहरुको उत्पत्ति थलो पनि यसैमा पर्छ । वास्तवमा लिब्जु गाउँपालिका बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर ठूलाठालू भनाउदाले हाम्रो आवाजलाई कम आँकलन गरेका छन् । मानेभन्ज्याङ होइन, लिब्जु गाउँपालिका हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान यथावत छ । किनभने लिब्जु महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो । यहाँका राईले मात्र होइन, क्षत्री, बाहुन, तामाङ, दलित, मगरलगायत सबैले लिब्जुलाई धार्मिक आस्था राखेर पूजा गर्छन् । हामीले कसैको भाग र भूमि खोजेका होइनौं । हाम्रो पुख्र्यौली थलोको नामलाई स्थापित गर्नमात्र चाहेका हौं । यो सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आवाज कायमै छ ।
प्रसङ्ग स्थानीय तहको चुनावकै गरौं । प्रदेश नं. १ मा दोस्रो तहको चुनाव हुँदैछ । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा तपाई उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईलाई नै गाउँपालिकाको टिकट दिइनुको आधार के के हुन् ?
साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । म मानेभन्ज्याङ गाविसको पूर्व अध्यक्ष हो भन्नेबारे कसैलाई भनिरहनु परेन । मैले मेरो कार्यकालमा जेजति काम गरें, इमानदारीपूर्वक गरें । भ्रष्टाचार, अनियमिता कहिंकतै गरिन । म कांग्रेसबाट निर्वाचित भएँ तर कुनै पार्टी विशेषलाई लाखा र पाखा पनि गरिनँ । प्रत्यक्ष रुपमा २०४८ सालदेखि हालसम्म निरन्तर जनताको घरदैलोमा पुगेकै छु । आफ्नो गाउँघर छाडेर कतै पलायन भएको छैन । भनौं न सामाजिक सेवामै छु भन्नेबारे समाज साक्षी छ । अर्को कुरा संविधानले नै समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई किटानका साथ व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा म किराती वाम्बुले राई पनि हुँ । वाम्बुले राई हुनुमा मलाई गर्व छ । यो वाम्बुले राईहरुको उत्पत्ति थलोको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु भन्नेमा पूर्ण आत्मविश्वास छ मभित्र । मैले कुनै जाति, वर्ग, लिङ्ग, छुवाछुत जस्ता भेदभाव गरेको छैन । गर्ने पनि छैन । त्यस्तो गरेमा मैले सामाजिक र कानुनी सजाय भोग्नैपर्ने हुन्छ । यद्यपि मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा उपयुक्त र सशक्त उम्मेदवारी मेरै हो । म सतप्रतिशत सही नहुन सक्छु तर म सही नेतृत्वका लागि उपयुक्त उम्मेदवार हुँ भन्ने मेरो दावी छ । मेरो विगतदेखि वर्तमानसम्मको क्रियाकलाप केलायर हेर्न सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु ।
तपाईको एजेन्डा चाहिं ?
मेरो एजेन्डा पारदर्शिता, समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकासमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । अब आउने दिनमा हामी जनप्रतिनिधिमात्र नभई सबै लागेमा यो ठाउँको मुहार फेर्छ भन्ने लाग्छ । धेरै ठाउँमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ । पर्यटन क्षेत्र बनाउन लिब्जु, भुम्जु, गुफाहरुको विकास गर्ने, हाम्रो सांस्कृतिक संरक्षण हुनुपर्छ । ठूलो स्रोत भनेको दुधकोसी हो । हामीले वास्ता गरिरहेका छैनौं । गिटी, बालुवाको स्रोत हो भने यहाँबाट बिजुली उत्पादनको पहल गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय प्रसारण २३२ केभी लाइनमा जोड्ने भन्ने छ । जसरी हुन्छ, छिट्टै केन्द्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने मेरो पहल हुनेछ । मेरो पहल त्यसैमा रहनेछ । मेरो प्रतिनिधित्व भनेको सिंगो वाम्बुले अनि ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकावासी जनसमुदायको हितमा हुनेछ ।
प्रकाश शाक्यको ‘ओखलढुंगा रुम्जाटार’
जनकले ल्याए ‘जुनकीरी’